IVilla ichibi labucala laseVenice kufutshane
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
Yindlu endala ye-manor ye-1700 esanda kulungiswa ukuze yazise lula lwangoku, ngokuhlonipha ngokupheleleyo iimpawu zokuqala ukuze ukonwabele umoya olula kodwa onomtsalane wexesha lakudala.
IMIQATHANGO EQHELEKILEYO YOMGAQO-NKQUBO WENKXASEKO YE-CORONAVIRUS
Kwimeko yobungqina bokungakwazi ukuhlala kwi-villa ngenxa yokuvalwa kwemida okanye enye inxulunyaniswe ne-Covid19 (ibhengezwe ubhubhane yi-OMS nge-11 kaMatshi 2020): ukuvalwa, ukuvalelwa, njl.. Isixa esipheleleyo siya kubuyiselwa ukuya kuthi ga kwi-24 iiyure ukusuka ekufikeni okulindelekileyo. Ukuba sirhoxisiwe kwiiyure ezingama-24 zokufika siya kugcina isixa sobusuku bokuqala.
Isizathu somqobo kunye noqhagamshelo lwayo olupheleleyo noluthe ngqo kunye ne-COVID-19 kufuneka lungqinwe ngamaxwebhu angenakuthenjwa.
Yindlu endala ye-manor ye-1700 esanda kulungiswa ukuze yazise lula lwangoku, ngokuhlonipha ngokupheleleyo iimpawu zokuqala ukuze ukonwabele umoya olula kodwa onomtsalane wexesha lakudala. Into ephambili ye-villa yintuthuzelo: iindawo ezinkulu kwigumbi ngalinye, ifenitshala yekhulu leshumi elinesithoba ukusuka kwisithethe samandulo saseVenetian kunye nezixhobo zanamhlanje, yonke into yenzelwe ukwenza iindwendwe zihlale zikhululekile.
Eyona nto yenza ukuba indlu ye-manor ibe yokhethekileyo sisitiya kunye nephuli. I-1500 sq. Imitha yengca enethafa, imithi kunye neentyatyambo, zonke zijikelezwe ngodonga oluphakamileyo olukhusela ngokupheleleyo ubumfihlo beendwendwe. Idama lokuthandana (11mt x 6mt x 1.50 ubunzulu) isolarium enebhedi zelanga kunye nedekhikhithi zonke zirhangqwe kwaye zikhuselwe ngocingo, enye itafile enkulu phantsi kwe centenary Boxtree, enye itafile enezitulo phantsi kwe gazebo, kunye ne barbecue yokupheka ngaphandle.
2 amagumbi amakhulu, elinye kumgangatho ophantsi kunye elinye kumgangatho wokuqala, zombini zinikezelwe iindwendwe baphumle, kunye nesofa, armchairs, bookshelves, TV satellite, DVD player, imidlalo yebhodi yonke iminyaka.
Uqhagamshelo olungenazingcingo kwi-Intanethi kuyo yonke indlu kunye negadi
Ikhitshi kunye negumbi lokutyela
Ikhitshi elinomtsalane neliphangaleleyo lahlulwe yangamagumbi amathathu: ikhitshi, indawo esetyenziswayo / igumbi lokuhlamba impahla, igumbi lokutyela, kunye netafile enkulu yenkulungwane yeshumi elinesithoba phambi kwendawo yomlilo.
Igumbi lokutyela linetafile enkulu yenkulungwane ye-19 kunye nefenitshala yakudala yaseVenetian. Iziko elikhulu lixhotyiswe ngeFireplace. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo nge-oveni, ifriji kunye nefriji, umatshini wekofu, itoaster. Ilader inesitya sokuhlamba kunye nesitya sokuhlamba izitya. Igumbi lokuhlamba linendlu yokuhlamba kunye nomatshini wokuhlamba.
Amagumbi okulala amahlanu
kumgangatho osezantsi: igumbi elinye elinebhedi ezimbini kunye negumbi elinye leebhedi ezingamawele - igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo kunye neshawari.
Kumgangatho wokuqala: amagumbi amabini anebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela ngalinye elineshawari
igumbi lokulala elinesithathu elinegumbi lokuhlambela labucala ngaphandle
konke oku kumbindi welali: iCodognè kufutshane neTreviso, iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwisango leConegliano lohola wendlela iVenice-Cortina. Indawo elula yokuqalisa ukufikelela eVenice ngendlela okanye ngololiwe ukusuka eConegliano, kunye nokutyelela iintaba zeDolomites kunye namahlathi eCansiglio.
io e Sergio, compagno di una vita, gestiamo alcune ville e alcuni appartamenti nell'area di Vittorio Veneto e Conegliano. Li affittiamo a turisti di tutto il mondo